Wararka - Soosaarayaasha taageerayaasha Warshadaha Bejarm waxay ka faa'iideystaan ​​shaqaalaha aqoon isweydaarsiga
Soosaarayaasha taageerayaasha Warshadaha Bejarm waxay ka faa'iideystaan ​​shaqaalaha aqoon isweydaarsiga
Soosaaraha taageere wershedaha Bejarm ---- SUZHOU Bejarm Technology Co., Ltd. wuxuu ku hawlanaa warshadaha qaboojinta iyo hawo soosaarka muddo 17 sano ah. Taageerayaasheeda warshadaha, qaboojiyeyaasha ilaalinta deegaanka iyo qalabka kale ee qaboojinta ayaa xaqiiqsaday qaboojinta aqoon isweydaarsiga iyo hawo bixinta 6000 shirkadood. Aqoon isweydaarsiyada aan la xiriirno, waxaan inta badan ku arki karnaa dhibaatooyinka sida kuleylka kuleylka, dhaawaca shaqada la xiriira, cudurrada shaqada, is casilaadda, iwm ee ay sababaan heerkulka sarreeya, boodhka, urta gaarka ah, iyo wareegga hawada oo liita iyo wixii la mid ah. Shirkaduhu badanaa waxay u baahan yihiin inay "bixiyaan" dhibaatooyinkaan
shaqaaluhu, iyada oo aan lagu xusin qiimaha sare, waxay inta badan saameyn ku yeelataa wax soo saarka wax soo saarka, waxay sii dheereysaa wareejinta gaarsiinta waxayna keentaa khasaarooyin aad u badan dhibaatooyinka noocan oo kale ah
Sida soo saaraha taageerayaasha warshadaha ee Suzhou, oo laga aasaasay magaaladan caanka ah. Bejarm wuxuu aasaasay qiimaha dhaqameed ee "abuurista waxtarka bulshada, macaashka u samaynaya shaqaalaha iyo la-hawlgalayaasha, iyo dhisida jawi shaqo oo wanaagsan oo loogu talagalay shaqaalaha aqoon isweydaarsiga" bilowgii aasaaskiisa. Waxaa la dhihi karaa mudnaanta waxay ku jirtaa casrigan xaadirka ah faa iidaduna waxay ku jirtaa mustaqbalka.
Ka dib markii marawaxadda warshadaha ee ay soo saartay shirkadda Bejarm lagu rakibay aqoon-isweydaarsiga, iyada oo loo marayo wareegga baalalka weyn ee marawaxadda, hawada gudaha ayaa kor loo qaadaa iyadoo urta gudaha ee urta laga soo saaro qolka, taas oo xoojineysa saameynta hawo-mareenka gudaha. Wareegtada joogtada ah ee taageere wershedeed waxay keentaa dabaysha wareegga saddex-geesoodka ah, ee dadka ka dhigaysa inay waxoogaa qabow dareemaan, waa isku dareen sidaad hadda uga soo baxdo barkadda dabaasha oo heer kulka jidhku wuxuu dareemayaa farqiga u dhexeeya 5 ℃ iyo 7 ℃, taas oo aad u raaxo badan.
Iyada oo leh hawo wanaagsan iyo saameyn qaboojiye, way adag tahay in la arko dhibaatooyinka sida heerkulka sare, boodhka, urta gaarka ah, iyo wareegga hawada ee liita ee aqoon isweydaarsiga. Wareegga wanaagsan ayaa keenaya hoos u dhaca muuqda ee kuleylka, dhaawaca warshadaha, cudurka shaqada, iyo is casilaad.
Intaa waxaa dheer, kharashka maalgashiga iyo hawlgalka taageerayaasha warshadaha waa mid aad u hooseeya. Tusaale ahaan u qaado taageere wershedeed 7.3m ah, hal taageere ayaa daryeeli kara aag dhan 1800 mitir murabac ah, halka isticmaalka korontada uu ku egyahay oo keliya 1 digrii saacaddii, loomana baahna fiilooyin adag. Alaabta noocan oo kale ah waa in lagu rakibaa sida ugu dhakhsaha badan. Xalalka warshadaha ee badan, fadlan wac: